Guddida Caafimaadka ayaa beddelay macnaha "kooxaha khatarta ku jira" - Mino Danmark
06/05/2020 / COVID-19 oo loo yaqaano corona virus /
Markii la sameeyay qeexitaan aad u ballaaran oo ku saabsan kooxaha khatarta ku jira ee cudurka COVID-19, Gudidda Caafimaadka ayaa hadda caddeysay kooxdee baa ka mid ah kooxda khatarta ku jira haduu uu caabuqa coronavirus ko dhaco. Waxaa hadda jira 7 kooxood oo khatar ku jira: 1. Dadka da’da weyn – waxay ku xirantahay xaalada guud ee caafimaadka Khibradeenu waxay na tustey in caabuqu khatar u yahay dadka ka weyn 70, waliba gaar ahaan dadka ka weyn 80 sano, oo ah markaas dadka khatar ugu jira xanuun daran. Dadka 65 jirka ah iyo kuwa ka yarba waxay si gaar ah khatar ugu jiraan haddii ay qabaan hal ama dhowr cudur oo raaga. Markaa, dadka da’da ka weyn 65 sano looma tirinayo inay si toos ah halis ugu jiraan, haddii ay caafimaad qabaan, jir ahaana ay firfircoonyihiin. Waxay sidoo kale ka dhigantahay in ayeeyooyinka iyo awoowooyinka, hadey caafimaad qabaan oo inay arki karaan oo hab siin karaan ciyaalka caafimaadka qaba ay ayeeyda iyo awoowga u yihiin.. 2. Dad degen xanaanada dadka waaweyn Dadka degen guryaha lagu xanaaneeyo waxay u badanyihiin dad waayeel ah, waxay leeyihiin cudurada raaga iyo tabar daro. Waxay dhammaan intani kor u kicineysa khatarta ay ku jiraan. 3. Dadka miisaanka culus Miisaanka culus ayaa badanaa lagu arkaa xaalada guud ee cudurada raaga sida sokorta ama cudurada wadnaha. Gaar ahaan dadka qaba BMI ka sareysa 35, ama BMI ka weyn 30 oo haystana cudur raaga, waxay halis ugu jiraan jiro daran hadey qaadaan COVID-19. 4. Dadka qaba cudurada raaga Maaha in dhamaan dadka qaba cudurada raaga inay ku jiraan dadka khatarta ku jira, gaar ahaan haddii si haboon loo daweeyo. Halkan waxaad ka heli kartaa liiska cudurrada keena xanuun daran hadaa laa qaado COVID-19: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Personer-med-oeget-risiko-ved-COVID-19 5. Caruurta qaba cudurada raaga Caruurta qaarkood ee qaba cudurada raaga, waxa dhici karta in ay khatar dheeraad ah ugu jiraan COVID-19. Kuwaasi waxay noqon karaan caruur horey u lahaan jiray – macaal cudurkan faafey ka hor – caawimaad dheeraad ah dhinacaa skoolka ama daryeelka. Caruurtan iyo qoysaskooduba waxay heli doonaan la talin shaqsiyeed ah, meelaha loogu talagay
6. Dadka aan lahayn deganaansho rasmi ah Dadka aan lahayn deganaansha joogta ah, badanaa waxay fursad u laheyn inay ilaaliyaan nadaafad wanaagsan ama ka fogaadaan dadka kale. Tani waxay keenaysaa in kor u kacayo faafinta caabuqa. Intaa waxa u dheer, dad badan oo aan lahayn guri joogto ah in ay sidoo kale haystaan cudurada raaga. Labadaa marka la isku daro, waxay ka mid yihiin dadka nugul cudurku xanuun daran u keeni karo.
7. Xaamiloyiinka Tani wali waxay ku saleysantahay mabda digtooni ah, maadaama dumarka uurka leh guud ahaan ay u nugulyihiin cudurada caabuqa ah. Lama tusin in haweenka uurka leh ama ilmaha aan dhalan ay khatar ugu jiraan cudur marka dad weynaha kale la isu barbar dhigo. Si kastaba ha ahaatee, xaamilooyinka isbitaalka la dhiigay COVID-19 awgeed, marka seddexda bilood ee ugu danbeysa uurka la gaaro, waxa lagu qalayaa cunuga intena la gaarin maalinta loo qabtey foosha. Intaa waxaa sii dheer, khatarta lagu yaqaano hooyada iyo ilmaha.
Dowladdu waxay dheereysay xiritaanku oo sii soconaya ilaa iyo Abriil 13keeda, 2020.
Shirka jaraa’id ee Wasaaradda Dowlada waxay dhacdey 23.03.2020 saacadu markay tahay 15.00 Raisalwasaaraha Mette Frederiksen waxay kordhisay dadaallada corona iyo […] Læs mere… Læs mere…
Du er her: Mino Danmark / Guddida Caafimaadka ayaa beddelay macnaha “kooxaha khatarta ku jira”